2007 – Family Of Films
Azhagiya Tamil Magan (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Azhagiya Tamil Magan (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး Azhagiya Tamizh Magan (2007) သည် IMDb 4.6/10 Filmweb 7.3/10 Googluse User 80% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Bharathan ကိုယ်တိုင်ရေးသားရိုက်ကူးထား၍ သရုပ်ဆောင် Joseph Vijay, Shriya Saran, Namitha တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. Guru သည် MBA ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ESP ရောဂါရှိနေသူဖြစ်သည် သူ့ရဲ့ အမြင်အာရုံပုံမှန်ဖြစ်လာသောအခါ သူသည် သူ့ရဲ့ ကောင်မလေးကို ဓါးနဲ့ထိုးမိပြီး မူဘိုင်းကို ထွက်ပြေးလေတော့သည် ကံမကောင်းသည်မှာ သူသည် လူဆိုးတစ်ယောက်နှင့် သွားတူလေရာ ပိုဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံရပုံကို အက်ရှင်ဟာသချစ်သူများကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ် ဇာတ်ကားတစ်ကားပါခင်ဗျာ… IDMb rating - 4.6/10 Genre - ...
Welcome (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Welcome (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.8/10 Filmweb7.3/10 Google User 78 % Genre: Comedy, Crime, Drama Run Time: 2h 39min စ်ိတ်ညစ်နေတာတွေပျောက်ချင်ရင် ဒီကားသာ ကြည့်လိုက် ရယ်ရလွန်းလို့ လန်းသွားမယ်ဗျာ….. Welcome (2007) သည် IMDb 6.8/10 Filmweb7.3/10 Googluse User 78% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Anees Bazmee ရိုက်ကူးထား၍ Anees Bazmee, Rajeev Kaul တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Akshay Kumar, Nana Patekar, Anil Kapoor တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Comedy, Crime, Drama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အရမ်းလှတဲ့ကောင်မလေးနဲ့ ချစ်ကြိုက်မိသွားတယ် ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကောင်မလေးရဲ့အစ်ကိုတွေက ဂန်းစတားတွေဖြစ်တာကို သိလိုက်ရဲ့အခါ ဘယ်လိုတွေ ...
Spider-Man3(2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Spider-Man3(2007) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 6.2/10 Rotten Tomatoes 63% Google User 86 % Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time:2hours 19 mins Spider-Man3(2007) သည် IMDb 6.2 Rotten Tomatoes 63% Goggle USers 86% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Sam Raimi က ရိုက်ကူးထားကာ Sam Raimi , Ivan Raimi တို့ကဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Topher Grace တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. တခြားကမ္ဘာက ထူးဆန်းသော အနက်ရောင် ဝင်စားမှုတစ်ခုသည် ...
The 1st Shop of Coffee Prince TV Series (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
The 1st Shop of Coffee Prince TV Series (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး IMDb 8.3 K.drama fan ​တွေအတွက်​ Upcoming New Drama များစွာနဲ့ စောင့်စားကြည့်ရှုပြီး အလုပ်ရှုပ်နေရချိန်မှာ FOF က အများနဲ့မတူ တမျိုးတမည် အဟောင်းထဲကအကောင်းစားလေးများကို တက်ဆက်နေရာကနေ ယခု နောက်ထပ် မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ Drama Series လေးကတော့... တချိန်​တခါက မြန်မာပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Coffee Prince ( ကော်ဖီချစ်သူ ) ပါ ! 2016 - 17 မှာ Goblin Drama နဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေကြားမှာ အကြွေခံရဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးဦး GongYoo ရဲ့ ပထမဆုံး ပရိတ်သတ်အသိအမှတ်ပြုလက်ခံကာ popular အဖြစ်ဆုံး မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ 2007 ...
Protégé (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Protégé (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 7.3/10 Genre: Crime, Drama, Thriller Run Time: 1 hour 46 mins Protégé (2007) သည် IMDb 7.3 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Tung-Shing Yee ရိုက်ကူးထား၍ Tung-Shing Yee, Man Hong Lungက ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားထားကာ သရုပ်ဆောင် Andy Lau, Daniel Wu, Louis Koo တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Crime, Drama, Thriller ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…. အထူးအေးဂျင့်တစ်ယောက်သည် အာရှ ရာဇ၀တ်မှု ထိန်းသိမ်းရေးမှာ ၈ နှစ်ကြာလုပ်လာပြီးနောက် သူသည် ဘဏ်ဖောက်တဲ့အဖွဲ့တွင် အဓိက လှုပ်ရှားနေသူထဲမှ တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြန်သည် နစ်ခ်သည် သူရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ် နဲ့ ငွေအပေါ်ကို သစ္စာရှိမှုကို ပြသလေရာ ဘယ်လို တွေဆက်ဖြစ်မယ် ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed By Win Kyaw Thu Translated by Wai Linn ...
DesaMuduru (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
DesaMuduru (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings: 6.1/10 Genre:Action,Crime,Drama Run Time:148mins Language:Telugu,Tamil ဒီတစ်ခေါက် ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ဘိုင်ရာဘာရဲ့ အကို Allu Arjun ရဲ့ ကားကောင်းလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေ မြေအောက်ဂိုဏ်းသားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ မြို့လေးတစ်မြို့. . . အဲ့ဒီမြို့လေးမှာရှိတဲ့ MMA TV Channel ဆိုတဲ့ Telecast Company တစ်ခုမှာ ဆတ်ဆတ်ကြဲကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ် ကိုယ်မှန်ရင်ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ် အမှန်တရားကိုလိုလားတဲ့ကောင်လေးရဲ့နာမည်က "Bala Govind - ဘာလာဂိုဗင်". . . ရုပ်သံကုမ္ပဏီမှာ Programm Directorဖြစ်တဲ့ သူ့အလုပ်က ဒုစရိုက်မှုတွေကို ချောင်းမြောင်းရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ပြီး ရုပ်သံလိုင်းကနေ ပြန်လည်ပြတဲ့ အလုပ်. . . တစ်နေ့တော့ ဒုစရိုက်နယ်မြေထဲမှာ မှတ်တမ်းရိုက်ကူးဖို့ အသွင်ယူပြီး သွားလာနေရင်း လူတစ်ယောက်ကို လူဆိုးတွေအများကြီးက သတ်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာတွေ့လို့ဝင်ကူညီပြီး လူဆိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကို ကိုးမား(သတိမေ့ရောဂါ)ဖြစ်တဲ့အထိ ရိုက်နှက်ပစ်လိုက်တယ်. . . သူမသိတာက ကိုးမားရသွားတဲ့ လူဆိုးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ သူတို့ မြို့ရဲ့ ...
Transformers (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Ratings : 7.1/10 Rotten Tomatoes 57% Genre: Action, Adventure, Sci-Fi Run Time :2hours 24 minutes Transformers (2007) သည် IMDb 7.1 Rotten Tomatoes 57% Google User 89% ရထားသော ဒါရိုက်တာ Michael Bay ရိုက်ကူးထား၍ Roberto Orci နဲ့ Alex Kurtzman တို့ က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ.. Cybertronian လူမျိုးနှစ်စုကြားက ရှေးဟောင်းတိုက်ပွဲတစ်ခ သူရဲကောင်း Autobots နဲ့ နတ်ဆိုး ...
Disturbia (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
Disturbia (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb ratings:6.9/10 Rotten Tomatoes 77% Genre : Action, Romance Run Time: 1 hours 45 mins ကေးလ် ဆိုတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ သူ့အဖေနဲ့ ငါးသွားမျှားပြီးပြန်လာတော့ လမ်းမှာ ကားမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး အဖေ ဖြစ်သူဆုံးသွားတယ် ။ ကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့ စပိန်စကားပြောသင်တန်းဆရာက ကေးလ်ကို သူ့အဖေပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုလိုက်တယ် ။ သူ့အဖေကို စော်ကားလို့ ကေးလ်က ကျောင်းဆရာကို လက်ရောက်မှု ကျူးလွန်လိုက်တယ် ။ အဲဒိလက်ရောက်မှုအတွက် ကေးလ်ကို တရားရုံးက နေအိမ်ခြေချုပ် သုံးလ ချလိုက်တယ် ။ ကေးလ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာ ဘယ်မှ မထွက်ရပဲ နေအိမ်ထဲမှာပဲ သုံးလ နေရတော့တယ် ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ အိမ်ထဲမှာ ငြိမ်ငြိမ်မနေပါဘူး ။ မှန်ပြောင်းတစ်လက်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကို လိုက်ပြီး လေ့လာနေပါတော့တယ် ...
Enchanted (2007) မြန်​မာစာတန်းထိုး
Enchanted (2007) မြန်​မာစာတန်းထိုး IMDb - 7.1/10 Rotten Tomatoes - 93% Type - Animation, Comedy, Family Time - 1h 47 min Enchanted (2007) ဇာတ်ကားသည် IMDb 7.1 Rotten Tomatoes 93 % ရထားသော Animation, Comedy, Family ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားမို့ ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… Andalasia ဟု ခေါ်သော နေရာတစ်ခုမှ မိန်းမပျိုလေးတစ်ဦးသည် သူမ၏ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ စုန်းဘုရင်မကြီးက သူမကို နယူးရောက်မြို့သို့ပို့လိုက်လေသည်… ထိုအခါ သူမသည် ရှေ့နေတစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြိုက်မိလေရာ ဘယ်လို ရယ်စရာတွေ ကြုံရမလဲ မိသားစုလိုက် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးခံစားနိုင်ကြပါစေလို့…… Review by : Win Kyaw Thu Translated by : ShweThaMeeMyaLay Yify Subtitle Encoded by ...